REER AWDAL MA YUHUUD BAA, HADDUU MUUSE BIXI AASKA REER AWDAL KA QAYB GALAY | Maalmahanews
REER AWDAL MA YUHUUD BAA, HADDUU MUUSE BIXI AASKA REER AWDAL KA QAYB GALAY
April 9, 2016 - Written by admin
Alle ha u naxariistee Dr. Cabdi aw Daahir waxa loo aasay si qarannimo ah oo uu u qalmo. Xukuumad iyo xisbiyaba waa loo dhammaa. Waxa se warbaahinta qaar maciinsadeen hadal kala fogaynaaya gobalada dalka oo ka dhigayaa qaarkood inayna ahayn in lala qaybsado dhibta soo gaadha.
Xisbi xaakinka Kulmiye oo eegaaya dalka oo dhan ayaa go’aansaday in Guddoomiyahu ka qayb qaato aaska loo sameynaayo aafadii ka dhacday Dila, iyadoo wafrti culus loo diray Burco. Haddaba waxa la yaab ah in la yidhaahdo maxuu Muuse uga qayb qaadan waayey aaska Dr. Cabdi Aw Daahir iyadoo isbahaysigu ilaa Sheekhooda Aadan Siiro siyaasadeeyey oo xukuumadduu uu hadh iyo habeen eedeen jiray oo uu hormood ka ahaa Wasiir Xirsi uu hadda ammaan la barbar joogo, kolka uu weli eedo aan qaban dusha ka saaraayo inta xukuumadda ku hadhay hoggaanka dalka.
Waar Reer Awdal ma aha Yuhuud, Muusena waa asiibay inuu kala qayb qaato tacsida. Bal ka waran hadday dhacdo inaan Muusena tegin Awdal, sow ma ahaateen in dhammaan inta xilka haysaa ayna u tirsanayn Awdal.
Dalka dhammaan siyaasiga fiicani xil ayuu iska saara. Waxuuna ku go’aan qaataa talada kolkaas ku habboon isaga oon dalka kala jecleysan.
Marxuumka ha laga daayo siyaasadda kol haddu dunida ka baqoolay. Maanta waxa hiil u aha in la saamaxo loona duceeyo. Yaan isaga oo geeriyooday loo soo jiidin neceb iyo xumaan aanu lahayn. Waxa habboon in la yidhaahdo ha la saamaxo. Si wacan oo wadajir ah ayaa loo aasay. Alle ha u naxariisto Dr. Cabdi Aw Daahir.